Ahoana ny famenoana ny boletus?
Araka ny fantatrao, mba hanamaivanana ny boletus amin'ny ririnina, dia mila manaraka fitsipika vitsivitsy ianao. Ny fepetra manan-danja amin'ny fanomanana ny vokatra tsara dia ny fifantenana ny holatra. Ampidirintsika eny amin'ny latabatra ny pineapple ary hodinihintsika tsara. Ny kankana sy ny holatra tranainy dia natsipy avy hatrany, raha toa ka tonga tao anaty harona izy ireo. Ny holatra kely dia misaraka amin'ny lehibe. Tsy ahy! Raha sasana ny holatra dia ho very ny tsiro manokana sy ny tsiro manokana. Miaraka amin'ny fanampiana amin'ny antsy maranitra dia manadio vovoka isika, manavaka ny fako sy ny fako hafa. Ny holatra lehibe dia tapaka amin'ny fomba toy izany fa ny haben'ny ampahany dia tamin'ny holatra tsara.
Ny holatra voaomana dia napetraka ao anaty kitapo plastika amin'ny ampahany kely. Mitandrema-fa ny fungi dia miongotra mihintsy, tokony hapetraka ao anaty fonosana iray izy ireo. Mitefina mafy ny kitapo, miezaka ny manala ny rivotra rehetra amin'izy ireo, ary mametraka izany ao amin'ny frizidera. Rehefa avy ny andro, dia mihosin-davenona ny holatra mba ahafahana mameno bebe kokoa ny kitapo. Araka ny hitanao dia sarotra be ny mamafy boletus vaovao.
Mba hamerenana fotoana
Matetika ny fanontaniana dia manontaniana hoe ahoana no fomba ahafahana manamboatra ombidia efa vita. Ohatra, amin'ny fararano dia miala sasatra ao an-tanàna ianao ary afaka manondraka holatra na mofomamy miaraka amin'ny tongolobe , fa amin'ny ririnina kosa dia miasa ianao ary matetika tsy ampy ny fotoana mahandro. Misy ny làlana iray - hiteny aminareo izahay hoe ahoana no ahafahana manangona boletus ao an-trano mba hahazoana vokatra vita amin'ny semi-seminera izay tsy maintsy hotafana ao anaty lavaka fantson-drano mikraoba na anaty menaka.
Ny holatra marefo
Voalohany, ndeha isika hiresaka momba ny fomba hanamboarana boletus mahandro.
trano fidiovana kely - sambo kely misy kapoaka 1,5 litatra;
onion kely - 3-4 pcs .;
lelafo lehibe - 2-3 p.
peas amin'ny mainty mainty sy mamy - 10-12;
dill onbrellas - 2 pcs.
Voasary ny gony, nodiovina ary voasasa. Napetraka ao anaty vilany izany, ampio ny tongolobe, ny lasopy, ny dipoavatra ary ny dill. Mofomamy manomboka amin'ny fanombohan-koditra efa ho ny iray kilaometatra isan'ora. Manipika azy amin'ny sivana na tantsaha, ary manipy ny zava-drehetra afa-tsy ny holatra. Rehefa voadio avokoa ny ranon-dra sy ny vovony dia apetraho ao anaty kitapo izy ireo ary apetraho ao anaty fonon-tsakafo, mba tsy hihozongozona amin'ny holatra ny holatra.
Mamafaza holatra matavy
Noho izany antony izany, ireo voangory lehibe dia mety tsara, izay amin'ny fomba voalohany ihany no azo alamina amin'ny sisiny.
tongolo gasy - 1 kg;
menaka tsy misy menaka tsy misy ravina maitso - 0.5 kaopy;
tendrombohitra sira tsy misy fanampiana - 1 tbsp. sotro;
Sakafo voajanahary vaovao - manandrana.
Ny holatra voaloto dia nodiovina, voasasa, tapaka tsara. Ny tsipika mipetaka kely araka izay azo atao. Amin'ny menaka misy menaka, avelao ny lozika, ampio ny holatra rehefa afaka minitra vitsy. Afangaro amin'ny hafanana avo amin'ny fomba toy izany ny fivoahan'ny vovoka rehetra avy amin'ny holatra. Solim, dipoavatra. Rehefa lasa volamena ny holatra, mialà amin'ny hafanana ary mangatsiatsiaka. Mametraka ireo holatra amin'ny fitoeran-javatra plastika isika, manakaiky mafy ary mametraka azy ireo ao amin'ny frizidera. Araka ny hitanao dia sarotra be ny manalefaka ny boletus amin'ny ririnina ao amin'ny kamiao na ny frizidera. Amin'ny ririnina, ovy no mani-paty ary manipy azy amin'ny bolôty voamaina na mofomamy.
Salad "Paramonikha" ho an'ny ririnina - sakafo matsiro sy mahazatra ho an'ny fikarakarana ny trano
Sakafom-boankazo amin'ny tavy tomato - hevitra tsy mahazatra ho an'ny fiarovana ny tokantrano
Kamboty ho an'ny ririnina - voly
Fanamboarana akanjo ho an'ny jacket 2016
Toeram-pivarotana ho an'ny kiraro
Miady amin'ny panely
Ahoana ny fomba fanoroana zaza vao teraka ao amin'ny trano iray?
Ankamantatra ho an'ny fararano 2015
Kafe avy amin'ny acorns - tsara sy ratsy
Amin'ny vanim-potoana inona no azonao ametrahana ankizy iray amin'ny mpandeha an-tongotra?
Inona no mandoro ny sofina havanana?
Jack avy amin'ny varotra rehetra: David Beckham nanjaitra akanjo ho an'ny saribakan-janany vavy